အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရောင်နီဦးကို ကြိုတဲ့ပန်း
29 Responses to “ရောင်နီဦးကို ကြိုတဲ့ပန်း”
မင်္ဂလာ နှစ်သစ် ပါ အစ်မ ရေ ... ချယ်ရီ ပန်းလေး တွေ မြင်ရတာ အိပ့်ချင် စိတ် ပျောက်သွားပါတယ် ...
ဓာတ်ပုံ ရိုက်တာ အရမ်း တော်တယ် လို့ပြောရမှာ ပဲဗျာ
တကယ့်ကို အလှတဲ့ ပုံလေးတွေ ပါ ...
ဘယ်ပုံတွေလှတယ်ပြောရမှန်းမသိအောင်ကို ပုံအကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ် အမရေ။ ဖင်နီနီငှက်ကလေးက ဗြွတ်ဖင်နီဆိုတဲ့ငှက်ကလေးလားမသိဘူး။ အမြီးနှခွနဲ့ဆိုငှက်တော်ပဲသိတယ်။ ပထမဆုံး ငှက်ပုံလေးကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။ ငှက်ကလေးက မဲနေပေမယ့် ငှက်ရယ် ပန်းရယ်က ကဗျာဆန်လှတယ်။ ကျမက ချယ်ရီဆို မြန်မာပြည်က ချယ်ရီအမျိုးအစားကိုပဲကြိုက်တာ။ ချယ်ရီက အကိုင်းရော ပန်းရော လှလွန်းလှတယ်။ ကိုင်းချည်း ပန်းအိုးထိုးထားရင်တောင် လှမှလှ။ ခု ချင်းပြည်မှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ ချယ်ရီခြံလုပ်နေတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ တကယ်သာသေချာရင်တော့ တခေါက်သွားရမယ်။ အမ ရဲ့ ဇွဲကိုလည်း အားကျသွားတယ်။ ပုံလေးတွေအတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထမင်းထုပ်ပြီး တောင်ပေါ် သွားတာထင်တယ်။ လေးရက်ဆိုတော့ မနဲပါလား။ ဒါကြောင့် ပုံလေးတွေ အရမ်း အသက်ဝင်နေတာကိုး။ ကြည့်တဲ့သူကတော့ လေးမိနစ်တောင် ရျိပါ့မလား မသိ။ တောင်ပေါ် သွားရိုက်ရတာက လေးရက်တိတိတဲ့။
ဓါတ်ပုံဆရာတွေ ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်းရဖို့ ဘယ်လောက် အားထုတ်ရတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပြီ။
ပုံလေးတွေ အရမ်းလှတယ်။ အပြင်မှာဆို ဒီလောက် လှချင်မှ လှမှာ။
ပျားကလေးတစ်ကောင်၊ ချောင်းနေတဲ့ပျား ပန်းအရောင်လေးတွေနဲ့ ကြိုက်လိုက်တာ။
ဇွဲကောင်းလိုက်တာ။ ၄ရက်တောင်။ ပုံစာလေးတွေကြည့်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်နေမယ့် မချောကို မြင်ယောင်လာတယ်။
ဟေး မ ချော... ဓါတ်ပုံရိုက် ၀ါသနာ ပါတာချင်းတူ နေ တယ်.. တော်တော်ဇွဲ ကောင်းတယ်.. ပုံကောင်းတွေ ရ လိုက်တယ်.. ကျေနပ်တော့ ... နှစ်သစ်မှာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့် ၀ ပါစေ...လို့။
ဖင်နီနီလေးက ဗွတ်ဖင်နီ (Red-vented Bulbul)
အမြီး၂ခွနဲ့ မီးခုိုးပြာငှက်က ငှက်တော်မွဲ (Ashy Drongo)
နှုတ်သီးကောက်ကောက်နဲ့ ခေါင်းအနီအမြီးအပြာလေးက ၀တ်ရည်စုတ်ငှက် (Crimson Sunbird )(တချို့ ပလိန်းရောင်လေးက Crimson Sunbird အမ သို့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကောင်လေးတွေ၊ အနီပြောက်လေးတွေပါတဲ့ကောင်က အထီး အမွှေးမစုံသေးတဲ့ကောင်လို့ ထင်ပါတယ်။)
မျက်ကွင်းဖြူလေးနဲ့ ဝါ၀ါလေးက မြန်မာမည်မရှိ ဒါပေမဲ့ မျက်ကွင်းဖြူလို့ တော့ကျမတို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ (White-Eye)တစ်မျိုးပါ။ ကိုယ့်ကို birding ခေါ်သွားလို့ (တကယ်ကို အပြင်မှာ ငှက်ကြည့်သွားရသလို ခံစားရလို့ ) ချောကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ဒီငှက်လေးတွေမြင်တော့သေချာတာက အာရှ ထဲကတနေရာ probably အရှေ့ တောင်အာရှတနေရာလို့ ယူဆမိပါတယ်။ အလျဉ်းသင့်ရင် ချောခွင့်ပြုရင် ချောရဲ့ ငှက်ပုံလေးတွေနဲ့ ပို့ စ်လေးတစ်ခုတင်ပြချင်ပါတယ်။
အပြေးလာကြည့်ပေမဲ့ ခုမှ မန့် လိုက်ရပါတယ်။ ညကျ နှစ်သစ်ကြိုနေရင် ဘုရားမရှစ်ခုိုးလိုက်ရမှာစိုးလို့ အရင်ဘုရားရှစ်ခုိုးနေလို့ နောက်ကျသွားတာပါ။
ကုိုယ့်ကိုသတိရမိတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်က၀မ်းသာသလိုချောရဲ့ သတိတရရှိမှုပေါ် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
မအိုင်အိုရာ ပြောပြမှပဲ ဘာငှက်တွေဆိုတာ သိတာ..ကိုယ့်ဘာသာဆို စာကလေးရယ်၊ ကျီးကန်းရယ်ပဲ သိတာ..
၄ရက်ကြီးများတောင် သွားရိုက်တဲ့ မချောဇွဲကိုတော့ သြချပါ့..ဒါကြောင့်လားမသိ ပုံကလေးတွေက အတော်လက်ရာမြောက်တယ်..
အသက်ဝင်နေတယ် ချောရေ။ အလှအပပေါင်းစုံနဲ့အတူ
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်မင်္ဂလာလေးမှာ ရက်တိုင်းဟာ
Happy New Year !!! ချောရေ။
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါချောရေ.. ချယ်ရီပန်းကလေးတွေနဲ့ ပျားကလေးတွေ ငှက်ကလေးတွေကို မြင်ရတာ စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ။ လှလိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ.. ကြည့်လို့ကိုမ၀ဘူး သဘောကျလိုက်တာ...
အလုပ်တစ်ခု ဘယ်လောက်ထိခက်မယ်ဆိုတာ လုပ်ရတဲ့သူက အသိဆုံးပဲ အစ်မချောရေ။ အစ်မချော ကြိုးစားပန်းစား လေးရက်တိတိ အချိန်ပေးပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေက တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနေပြီး အသက်ဝင်လှပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူတိုင်းရဲ့ စိတ်ကို ချမ်းမြေ့စေပါတယ်။ အစ်မချောနဲ့အတူ ၂၀၁၂ ရဲ့ရောင်နီဦးကို မင်္ဂလာရှိစွာနဲ့ ကြိုဆိုလိုက်ပါပြီ...
နှစ်သစ်မှာ လူသားအားလုံး ချမ်းမြေ့ကြပါစေ...
၂၀၁၂ မှစပြီး လိုအင်တွေ အားလုံပြည့်ပါစေ
မချောရဲ့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ တောင်ပေါ်တက်ပြီးကြိုးစားရိုက်ယူခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေကြည့်ခွင့်ရအတွက်ကျေးဇူးပါ။
ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ကြည့်ြ့ပီး ခေါင်းကိုက်တာတောင် ကြည်သွားတယ်.. :D :D .. ပျော်စရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ မမချောရေ။။။
ပုံလေးတွေက ကြည့်မ၀အောင် လှပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့် ရစေပါတယ်...
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ် ၂၀၁၂ ဖြစ်ပါစေ....
ငှက်ကလေးတွေပုံက ချစ်စရာ တကယ် ပင်ပင်ပန်းပန်းနရဲံ ရိုက်ထားရတာပဲ ။
မင်္ဂလာနှစ်သစ် နော့် မချော ။
Mae Coe said...
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ပါ မမ...
ပန်းတွေငှက်တွေ တွေ့လိုက်ရလို့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ် ဖြစ်သွားပါပြီ ချော။
ငှက်ကလေးတွေ သဘာဝကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ရိုက်ထားတယ်ဆိုတာ ပုံတွေ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိလိုက်တယ်။ ငှက်ကလေးတွေက လှတယ်။ ချယ်ရီတွေကလဲ လှတယ်။ ဓာတ်ပုံရှင်ကလည်း နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အလှချင်းပြိုင်နေမှာ သေချာတယ်။
စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပျော်ရွှင်ရသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ချောရေ...။ ဆထက်တိုးလို့ သုတ၊ ရသတွေ မျှဝေနိုင်ပါစေနော်။
မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေ
ပုံတွေ အရမ်းလှတယ် မချော...၊ အပင်ပန်းခံပြီး ရိုက်ခဲ့ ရကျိုး နပ်ပါတယ်ဗျာ..၊ ငှက်တို့၊ ပျားတို့ကို ရိုက်ရတာ တကယ်ကို မလွယ်တဲ့ အလုပ်ပါ..၊ အခုလို ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ရိုက်လာနိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ်၊ ငှက်တွေကို နာမည်ပြောပေးတဲ့ မအိုင်အိုရာကိုလည်း ကျေးဇူးပါပဲ..၊ မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေဗျာ...။
ငှက်နာမည်လေးတွေ ပြောပြသွားတဲ့ Ioraကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်။ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ ပုံကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဝမ်းမြောက်စွာ ခွင့်ပြုပါတယ်။
ချစ်ခင်ရသော မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးပါရှင်။ နှစ်သစ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။
ငှက်ပုံနဲ့ ပန်းပုံတွေကို ခံစားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ၄ ရက်တောင် အချိန်ယူပြီး ရိုက်တယ်ဆိုလို့ လေးစားမိပါတယ်။ ပုံတွေက ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Professional မဟုတ်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလိုပုံလေးတွေရတာကိုပဲ ကျေနပ်ပါတယ်။ အားထုတ်မှုကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက် အားထုတ်နိုင်ပါစေ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်အတွက် နှုတ်ဆက်ပြီးမှာ ပို့စ်ကွန်မန့်ပြန်လာရေးတာပါ။
မင်္ဂလာရှိတဲ့ နှစ်သစ်လေးပါ.... ခုမှလာနှုတ်ဆက်ရတယ်...။
အခုမှလာကြည့်သွားပါတယ်။ တစ်ပုံခြင်းကိုကြည့်သွားတာပါ။ ချော လည်းတော်တော်
ပန်းလေးတွေကလှပြီး ငှက်ကလေးတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။
ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့လူက တော်တော်စိတ်ရှည်တာပဲ ..း)
Happy (Belated) New Year ပါ ချော ရေ..
ချောနှမ ကွန်မကောင်းတာနဲ့ ပုံတွေ မပေါ်လို့ သေချာမကြည့်ရဘူး ဆိုးလိုက်တာ အခုတော့ တ၀က်တပျက်လေးကြည့်ရလို့ ကျေနပ်ရပြန်ရော ချော ရေ ငှက်ကြည့်အဖွဲ့ထဲဝင်လို့ရပြီ. လှုတ်ရှားနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ရတာ ခက်တယ်နော ...ချောတော်တော် တော်တယ်နော.....စိတ်ရှည်လက်ရှည်လုပ်ထားတာ.....နှစ်သစ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ